हेलम्बुको भिमथाङमा गएको यहि ड’रलाग्दो पहिरोले मेलम्ची बजार बगाएको रहेछ, हेर्नुहोस हिमालको फेदसम्म हेलिकप्टरबाट खिचिएको दृश्य ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
August 2, 2021 August 2, 2021 AdminLeaveaComment on हेलम्बुको भिमथाङमा गएको यहि ड’रलाग्दो पहिरोले मेलम्ची बजार बगाएको रहेछ, हेर्नुहोस हिमालको फेदसम्म हेलिकप्टरबाट खिचिएको दृश्य ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
शनिबार रातिदेखि आएको बाढीले हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाका १७ घर टहरा बगाएको छ । ती मध्ये नौ पक्की र आठ कच्ची रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत असार १ गते आएको भीषण बाढीले लेदो भरिएका घर गएरातिको बाढीले बगाएको हो ।
ती घरटहरा खाली थिए । बाढीले चनौटेको रातो पुल बगाएको छ । स्थानीयवासी हस्त पण्डितले दिनुभएको जानकारी अनुसार वाढीले आज विहान पुल बगाएको हो । मेलम्ची– ७ र ८, पाँचपोखरी– १ र २ र हेलम्बुका धेरै वडा जोड्ने एकमात्र विकल्पका रुपमा यो पुल रहेको थियो । पुल बगाएसँगै अब यो भेगमा सवारीआवतजावत बन्द छ ।
खोलामा लेदो सहितको बाढी आएको र बाढी घट्ने, बढ्ने भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । हेलम्बु राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा मेलम्चीबाट हेलम्बु सवारीसाधन जान नसकेको मेलम्ची नगर प्रमुख डम्बर अर्यालले जानकारी दिनुभयो । हेलम्बु गाउँपालिकाका सदस्य बाबु लामाले पहिरो निरीक्षणको क्रममा लिएको भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस:
आज पनि घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो…..